Ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta ka billabay hub uruurin goobo ka tisan koonfurta magaalada Muqdisho iyo ku dhufo ee ka dhaqaaqa lagu hayo ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda ee taagreesan Col. Cabdullahi Yuusuf iyo Prof. Geeddi oo ku soo kordhaya. Ruunkinet 10/01/07
Ciidamada Itoobiya iyo Ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo u badan taageerayaasha ra'isul wasaare Geeddi iyo madaxweyne Yuusuf ayaa ka billaabay hub ka uruurin goobo ka mid ah caasimadda Soomaaliya.
Ciidamada Itoobiya oo ay la socdaan ciidamada DFS ayaa maanta hub uruurin ka billaabay agaraarka sarta Soobe iyo K4.
Ciidamadan ayaa halkaasi la wareeyay ayagoo guriyo iyo goobo ganacsi baaray kadibna ka qaaday hubkii ay ku arkeen meelahaasi in kastoo la sheegayo in ay qaar ka tirsan shacabka ku dhaqan halkaasi ay xireen.
Arrinta ayaa ka dambesay markii dhowr jeer weerar gaadmo ah lagu qaaday ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda oo halkaasi marayay.
Dhanka kale, weerararada gaadmada ah ee lagu hayo ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda ayaa ku soo kordhaya magaalada Muqdisho ayadoo 48dii saac ee la soo dhaafay ay halkaasi ka dheceen dhowr weerar oo lala beegsaday ciidamada huwanta ah.